Jamhuuriyadda Chuvashia - "Nidaamka Baradhada" majaladda
Bogga guriga Calaamadda Jamhuuriyadda Chuvashia
Calaamadda: Jamhuuriyadda Chuvashia
Xulashada iyo soosaarka abuurka baradhada. Khibrad u leh Machadka Cilmi-baarista ee Chuvash ee Beeraha
Svetlana Konstantinova, madaxa taranka baradhada iyo kooxda wax soo saarka abuurka, Chuvash Research Institute of Agriculture - laan ka mid ah Machadka Sayniska ee Miisaaniyadda Dawladda Federaalka ee Xarunta Cilmi-baarista Federaalka ee Saynisyahannada Waqooyi-Bari ee Machadka Cilmi-baarista Chuvash ee Beeraha ayaa sameeya cilmi-baaris cilmiyeed .. .
Beeritaanka baradhada: Jamhuuriyadda Chuvash
Dhulka: 18 sq. km dadka ku nool: 343 qof, kuwaas oo 1% ay yihiin dadka degan magaalada. Booska juqraafi: jamhuuriyadu waxay ku taal bariga Yurubta bari...
Madaxa Chuvashia ayaa booqday mid ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah gobolka
Madaxa Chuvashia, Oleg Nikolaev, ayaa booqday mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee gobolka iyo Ruushka ee soo saarista baradhada - shirkad xaddidan oo xaddidan ...
Miis wareeg ah "Suuqa Ruushka ee baradhada iyo baradhada". Waxaan kugu martiqaadaynaa inaad ka qaybgasho!
Maarso 3-4, 2022, Bandhiga XIV Interregional Industry Exhibition "Badhadhada-2022" ayaa lagu qaban doonaa Cheboksary. March 4, iyada oo qayb ka ah barnaamijka ganacsiga ee bandhigga ee ...
Beeralayda Chuvash waxay siiyaan basasha jamhuuriyadda Belarus
Laba beerood oo ku yaal degmada Batyrevsky ee Jamhuuriyadda Chuvashia waxay diyaariyeen oo u direen dufcad dhoofinta basasha oo ah 40 iyo 20 tan oo noocyo Sturon ah, ...
Madaxa Jamhuuriyadda Chuvash ayaa ku baaqay in la kordhiyo wax soo saarka eco-products
Isku-dhafka beeraha ee Chuvashia waa inuu isticmaalaa dhammaan fursadaha si loo kordhiyo wax soo saarka wax soo saarka deegaanka, abuuraan "calaamad cagaaran" oo ay taageeraan horumarka sayniska iyo teknoolajiyada ee ...
BANDHIGGA XIDHIIDHKA GOBOLKA XIV "BARADADA-2022"
Maarso 3-4, 2022, Bandhiga XIV Intergional Exhibition "Badhadhada-2022" ayaa lagu qaban doonaa Cheboksary. Qabanqaabiyeyaasha bandhigga ayaa ah Wasaaradda Beeraha ee Jamhuuriyadda Chuvash, FGBNU ...
Abaarta ayaa ka reebtay Chuvashia qayb muhiim ah oo ka mid ah goosashada dalagyada xididka iyo dalagyada miraha
Aagga khasaaraha dalaggu waa qiyaastii shan kun oo hektar, qiyaastii 53 shirkadood oo beeraley ah oo gobolka ah ayaa saameeyay. Maamulka ayaa soo bandhigay xaalad deg -deg ah oo ahmiyad goboleed ...
Maalinta Goobta baradhada ee LLC Agrofirma Slava Potato
Luulyo 9, 2021, Maalinta Beerta Baradhada, oo loogu talagalay sannad-guuradii 20-aad ee kooxda baradhada Slava, ayaa lagu qabtay degmada Komsomolsk ee Jamhuuriyadda Chuvash. Taariikhda...
Beeraleyda Chuvashia ayaa loo celin doonaa lacagtii ay ku soo iibsadeen qalab si qoto dheer loogu farsameeyo baradhada iyo khudradda
Chuvashia waxay dib u bixin doontaa 30% qiimaha iibka qalabka loogu talagalay diyaarinta qoto dheer ee caanaha, hilibka, baradhada iyo khudaarta. Go’aankan ayaa la gaaray maanta...
Bog 1 laga bilaabo 2 1 2 Next